Siyaasiyiin iyo Madax-dhaqameed ka Difaacay Shirkadda Dahabshiil Eedo Ay Usoo Jeediyey Xildhibaan Baarlamaanka Puntland • Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News | Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News
Siyaasiyiin iyo Madax-dhaqameed ka Difaacay Shirkadda Dahabshiil Eedo Ay Usoo Jeediyey Xildhibaan Baarlamaanka Puntland
Siyaasiga ruug caddaaga ah ee Cabdiraxmaan Qawdhan, oo muddooyinkii Puntland jirtey baarka sare ee siyaasadda kaga jirey, ayaa hadal ka soo yeeshay Guddoomiyaha Guddiga difaaca ee Baarlamaanka Puntland, Xildhibaan Saadiq Garaad Abshir, ku tilmaamay deelqaaf aan loo meel deyin.
“Shirkada Dahabshiil waa shirkad la yaqaano oo waxtar badan ayey ummadda Soomaliyeed u leedahay, uguna Fadhidaa. 1 milyan iyo 500 oo kun oo qof in gaadha ayey ururisaa oo ka shaqeeye, oo ay shaqo abuur u sameysay,” ayuu yidhi, isaga oo raaciyey inaan waxtarku intaa ku ekayn oo siyaabo badan oo kala duwan oo kale shirkaddu eax u taarato bulshada, hormarkeeda iyo nabadeedana kaga qayb qaadato.
“Dadka Kala duwan ee ugu shaqeeye Min gobal Ilaa Tuulo, waa dadka ugu sharafta badan, uguna Diinta badan, Ugu wanaagsan, una Dhaqanka Wanaagsan,” ayuu qiray.
Waxa siyaasigu u soo jeediyey xildhibaanka inaanu karaamadiisa iyo tan ummadda uu metelo hoos u dhigin ee uu ka noqdo tiraabihii caaddifadaysnaa ee weerarka ahayd ee uu la tiigsaday shirkadda Dahabshiil, raalli gelin buuxdana ka bixiyo.
“Hadalkaasi waa hadal aan meesha qaban, ataagna ah weeye, Isagana waxan u soo jeedinaya in uu raali galin deg deg ah ka bixiyo; waxa noocas oo kale ahna in aan mar danbe loo geysan ganacsiga oo dhibaato loo geysan ummadda Soomaliyeed meel kasta oo ay joogto,” ayuu yidhi.
Hadalkan Xildhibaanku waxa uu ladhay oo maragfur u noqday Garaad Saleebaan Garaad Maxamed, oo adeer run ah u ah Xildhibaanka hadalku ka tegey, ahna Garaadka ugu facaweyn madaxdhaqameedka Gobolka Sool ee soo-jireenka ah, oo ka barraxay shirkadaha Dahabshiil arrimaha uu Saadiq Garaad Abshir la xidhiidhiyey.
Waxa uu Garaad Saleebaan sheegay inuu ku qanacsan yahay inaan mulkiilaha Shirkadaha Dahabshiil si toos ah iyo si dadban toonna u aanoobin eedda uu xildhibaanku u soo jeediyey.
Waxa beryahan dambe soo if baxayey oo baraha bulshada lagu arkayey ashkhaas, si u muuqata inay badheedh u dhagaraysan yihiin, ku weeraraya shirkadaha Dahabshiil iyaga oo u dan leh inay ku kala fogeeyaan shirkadaha iyo macaamiisheeda daacadda u ah adeegyadeeda eek u qanacsan.